नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भुसालले कसरी गरे पिएचडी ?| Nepal Pati
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भुसालले कसरी गरे पिएचडी ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले पिएचडी (विद्यावारिधि) गरेका छन् । भुसालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहास विषयमा ‘जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रम’ शीर्षकमा शोधअनुसन्धान पुरा गरी विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि संलग्न भुसालले बैचारिक नेताको छवी बनाएका छन् । आधा शताब्दीदेखि राजनीतिमा सक्रिय भुसालले कक्षा ८ देखि एमएसम्मको अध्ययन जेलबाटै गरे । भुसालले ६५ वर्षको उमेरमा पिएचडी गरेका छन् । डा. बेदुराम भुसालसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको अध्ययन सम्वाद ।
राजनीतिमा सक्रिय हुँदाहुँदै कसरी सम्भव भयो पिएचडी ?
राजनीतिमा वास्तवमा अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । राम्रो राजनीति गर्ने हो भने राम्रो अध्यनयको पनि खाँचो पर्छ । मैले राजनीतिमा पनि अध्ययन गरिरहन्थेँ, गरिरहन्छु पनि । त्यसकारण राजनीति गर्दागर्दै पनि यो सम्भव भयो । आखिर अध्ययनकै कुरा हो । अध्ययन गर्नुपर्छ र गरियो ।
समय कसरी निकाल्नुभयो ?
समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । समयको कारण मलाई पिएचडी सक्न पाँच वर्ष लाग्यो । बीचमा चुनाव लगायतका पार्टीका काम परे । त्यसले गर्दा समय अलि बढी नै लाग्यो । दिनभरी पाटीको काम गरेर आएपछि पनि साँझमा पढ्थेँ, अहिले पनि पढ्छु ।
पिएचडी गर्नुपर्छ भन्ने सोच कहिले/कसरी आयो ?
नेपालको राजनीतिमा अध्ययन गरेका मान्छे छैनन् भन्ने प्रचार बढी नै भएको छ । त्यसले मलाई बढी नै घोचिरहेको थियो । हुनत डिग्री नलिदा पनि पढिन्छ, पढ्छन् । तर, डिग्रीलाई नै पढाइको मापदण्ड मानिने भएकाले पिएचडी गरौँ न त भन्ने लाग्यो ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि कठिन संघर्ष गर्नुभयो, जेलनेल भोग्नुभयो ? त्यो संघर्षभन्दा पिएचडी गर्न सहज भयो होला हैन ?
हाँस्दै….। त्यस हिसावले त यो सहजै हो । मैले कक्षा ८ देखि माथिको सम्पूर्ण पढाइ स्कूल/कलेजमा पढेर पास गरेको होइन । कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा मलाई जेलमा हालिएको थियो । मैले जेलभित्रैबाट एसएलसी, आइए, बिए पास गरेँ । एम फस्ट इयरको परीक्षा दिएपछि मात्र म जेलबाट छुटेँ । मैले नियमित रुपमै अध्ययन गरिरहेँ । त्यही अध्ययनले नै मलाई पिएचडी पनि गरौँ न त भन्नेतर्फ लग्यो । एउटा विधि अन्तर्गत रहेर अध्ययन गर्नुपर्दा, सीमामा बाँधिनुपर्दा केही जटिलता हुँदारहेछन् । अरु अप्ठ्यारो मैले महसुस गरिनँ ।
अव पिएचडीको उपयोग कसरी गर्नुहुन्छ ?
राजनीतिमा पढेका मान्छे पनि छन् । राजनीति गर्दागर्दै पिएचडी गर्नेहरू पनि छन् भन्ने सन्देश दिनु नै हो । मैले अरु हिसावले सदुपयोग गर्ने बारे केही सोचेको छैन् ।
अहिलेका नेता तथा कार्यकर्ता अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्नुभन्दा सतही विषयमा लागेको देखिन्छ । उनीहरूलाई तपाईको सुझाव के छ ?
मान्छे नियमित रुपमा प्रतिवद्धताका साथ लागिरहनुपर्छ । निरन्तर लागियो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजनीति गर्ने मान्छे निराश हुनुहुँदैन । र अल्छी पनि गर्नुहुँदैन । त्यसरी अगाडि बढियो भने राजनीतिक रुपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ र अन्य हिसावले पनि सफतला प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो एउटा पीएचडीको अनुभवको कुरा मात्रै होइन । म १८÷१९ वर्षको उमेरमा पार्टीमा लागेँ र अहिले ६५ वर्षमा हिड्दैछु । त्यो अनुभवको आधारमा के भन्छु भने मान्छे नियमित जाँगर नमारी, निराश नभइ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्दा केही न केही सफलता प्राप्त हुन्छ ।